Sawirro: Ninkii ugu horreeyey oo aragga la' oo imtixaanka dugsiga sare ka gudbay - Aayaha
Home»LAYAABKA»Sawirro: Ninkii ugu horreeyey oo aragga la’ oo imtixaanka dugsiga sare ka gudbay
Muddo kaddib sanadka marka uu ahaa 2010-kii ayuu Daniel go’aansaday inuu dib ugu laabto waxbarashadiisa isaga oo wax la baranayey dadka caadiga ah ee aan aragga wax ka qabin.
Wuxuuna sanadkan ku guuleystay Imtixaanka dugsiga sare ee lagu galo jaamacadaha, waana qofki ugu horreeyey oo dalka Ruwanda ka soo jeeda oo imtixaanka dugsiga sare ka gudbo.
Siduu casharrada u qaadanayey?
Gurigiisa marka uu ku noqdana wuxuu dib u dhageysanayey uuna u qoranayey sharraxaadda macallimiinta wuxuuna ku qoranayey Koombiyuutarkiisa Laptop-ka.
Ma u baahdaa caawimo xilliga uu wax qoranayo?
Daniel xilliga casharrada cod ahaan uu u soo duubtay uu Koombiyuutarka uu ku roganayo cidna caawimaad ugama baahdo oo koombiyuutarka iyo isticmaalkiisa si wanaagsan ayuu u yaqaannaa oo isaga ayaa maamulanaya.